Umaka: gcina | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJuni 10, i-2014 NgoMgqibelo, ngoMeyi 7, 2016 Douglas Karr
Win, Gcina, Khulisa… leyo yi-mantra yenkampani ezisebenzisayo yokumaketha i-Right On Interactive. Ipulatifomu yabo yokumaketha ayigxili ekutholakaleni kuphela - bagxile kakhulu kumjikelezo wempilo wamakhasimende nokuthola amakhasimende afanele, ukugcina lawo makhasimende, nokukhulisa ubudlelwano nalawo makhasimende. Lokho kusebenza kakhulu kunokucinga okungapheli kwemikhombandlela. I-T2C ihlanganise le infographic ibuza umbuzo obalulekile, kungani singakhi iminyango yethu yezokukhangisa ngale ndlela? Kungani singenzi njalo